Amazing Archives - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
अडियो / भिडिओ / अनौठो समाचार
हेर्दै मुटु कमाउने भिडियो जसलाई हेरेपछी नरुने मान्छे को होला ???
दुनियाँको अनौँठो देश जहाँ, पुरुष र महिलाबीच नभई महिला महिलाबीच विहे हुन्छ ।
विवाह भन्ने बित्तिकै महिला र पुरुषबीचको दाम्पत्य सम्बन्ध गाँसिने मौका । तर दुनियामा एउटा यस्तो देश पनि छ जहाँ पुरुष र महिलाबीच होइन, महिलाहरुले नै आपसमा विहे गरिरहेका छन् । हो, अफि्रकी देश तान्जानियामा...
तस्विरमा हेर्नुहोस्, जहाँ सामान्य गल्तीका कारण पनि मानिसको ज्यान जानसक्छ ।
संसारमा केही यस्ता मानिसहरु पनि हुन्छन्, जो आनन्दका लागि जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति पनि सामना गर्न पछि हट्दैनन् । यसमध्ये कोहि अग्ला पहाडको बीचमा टाँगिएको डोरीमा बिना कुनै सहायतामा हिड्छन् त कोहि भीरभिरै साइकल कुदाउँछन्...
10 Amazing Churches That Are Nothing Like Your Own
The “Chicken Church” in the jungles of central Jave was built by Daniel Alamsjah, 67, who says that he receivedadivine command to createahouse of prayer in 1989. It’s meant to...
Ten Hilarious Wedding Cake Fails
The wedding is, for most women and some men, the most special day of someone’s life. Celebrating the fortunate happiness of two perfect halves becoming one, the wedding is an event which simply can’t...
दुनियामा एउटा यस्तो फाइभस्टार होटेल छ जहाँ केवल मरेका मान्छेहरु बस्छन् ।
मानिस मरेपछि अन्तिम संस्कार गरिन्छ रितिरिवाज अनुसार । तर दुनियामा एउटा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ मानिस मरिसकेपछि उसलाई घाट वा चिहानमा होइन फाइभस्टार होटेलमा लगिन्छ । उक्त होटेलले मान्छेका लासलाई यस्तो सेवा दिन्छ...
Agora Tower in Taipei, Taiwan Rafiq Azam, with SA Residence, Dhaka, Bangladesh Zaha Hadid Barcelona Cobra Towers Kuwait New York Another Old Building, Pisa Tower Belgacom-building Building-of-Awesome Burj-Khalifa Burj-Kalifa-Dubai Chrysler-NYC Cool-Building Dancing-Building-Prague-Czech-Republic Flatiron-Building Frozen...
हात र खुट्टा नभएका निकको लभ स्टोरी जसले लाखौ मानिसलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा प्रदान गर्छ ।
विना हात र विना खुट्टाको जिन्दगी कस्तो होला ? के तपाईं यस्तो जिन्दगी विताउने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? शरीरमा केही कमी आउँदा वित्तिकै हामी अभाव महसुस गर्छौँ । तर, निक युजिकिक लाखौ मानिसलाई अगाडि...
Our world is so full of wonders that new and amazing places are discovered every day, be that by professional photographers or amateurs. Different geographical locations, climatic conditions and even seasons offer the widest...